Bath and Body Works ကသူတို့ဟယ်လိုဝင်းအကြောင်းကို iHorror ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
ပင်မစာမျက်နှာ ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း ရေချိုးခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလုပ်များသည်သူတို့၏ဟယ်လိုဝိန်းအစီအစဉ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
by Trey Hilburn III ကို ဇူလိုင်လ 27, 2020
ကရေးသား Trey Hilburn III ကို ဇူလိုင်လ 27, 2020
ဒါဟာပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသာဖြစ်ခဲ့သည် target က သူတို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်သူတို့ရဲ့ဟယ်လိုဝိန်းကုန်ပစ္စည်းများစတင်ရောင်းချခဲ့သည်။ အခု ရေချိုးကန်နှင့်ကိုယ်ထည်လုပ်ငန်း မွှေးသောရာသီအလိုက်ကောင်းကျိုးများကိုသူတို့ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြသည်။
Bath and Body စုဆောင်းခြင်းတွင်မျှော်လင့်ထားသောဖယောင်းတိုင်များ၊ သို့သော်ညအမှောင်ထုများနှင့်အခြားပစ္စည်းများကဲ့သို့ပျော်စရာရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအနည်းငယ်ရှိသည်။ ငါတို့အကြိုက်ဆုံးဆိုတာကိုပြောဖို့ခဲယဉ်းတယ်၊ သို့သော်သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်သွေးသည်အေးမြနေသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Target သည်သူတို့၏ဟယ်လိုဝိန်းပစ္စည်းများကိုမကြာသေးမီကတင်ခဲ့သည်။ သူများသည်ရောင်းပြီးသားဖြစ်သည် အောက်တိုဘာလဟာဝေးလံခေါင်သီတဲ့လမ်းတွေပဲလို့သင်စဉ်းစားမိရင်မယုံနိုင်စရာပါပဲ။ ငါသော်လည်း spookiness များအတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတန်ဖိုးထားနိုင်ပါတယ်။ ရာသီအလိုက်ပစ္စည်းတွေကငါ့အတွက်နှစ်တစ်နှစ်ကျန်နေသေးတယ်။ တကယ်တော့ခရစ်စမတ်တ ၀ ိုက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီအလှဆင်ပစ္စည်းတွေကိုဟယ်လိုဝိန်းပွဲနဲ့ငါရောနှောလေ့ရှိတယ်။ ယခုဤရေချိုးနှင့်ခလုပ်အလုပ်များစုဆောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အိမ်သည်ကျန်ရှိသောနှစ်အတွက်ကောင်း။ ရာသီအလိုက်နံ့သာရှိသည်။
Bath and Body Works စုဆောင်းမှုမှသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပစ္စည်းအချို့ကားအဘယ်နည်း။ သန်းခေါင်ယံ Boo Citrus? ပြီးပြည့်စုံသောဖရုံသီး? သရဲခြောက် သင်၏မှတ်စုများကိုမှတ်ချက်များအပိုင်းတွင်အသိပေးပါ။
ကီဗင်စမစ်၏ 'Killroy Was Here' ဇာတ်ကားသည် Nice နှင့် Gory ရရှိသည်
Universal Orlando နှင့် Hollywood တွင် Halloween ထိတ်လန့်ဖွယ်ညများဖျက်သိမ်းခဲ့သည်